Ny finoana ny voan-tsinapy | Apg29
Ahoana no ahafahantsika mandray anjara amin'ny finoana bebe kokoa, lehibe sy matanjaka kokoa ny finoana?
Misy ihany koa ny maro ao ny olona izay manana ny toe-tsaina fa ny finoana matanjaka sy ny zavatra mitsingevana tsy miraharaha. Fa izany tsy ny rehetra. Ho hitantsika ao amin'ny Soratra Masina mampiseho fa ny finoana dia ny zavatra.
Miresaka ny Baiboly be dia be mikasika ny finoana sy ny tokony handray ny finoana. Kristianina maro te mba hitombo ny finoany, ka dia ny finoana lehibe kokoa mahazo hery. Tsy dia tena azo atao ny hiaina izany.
Misy ihany koa ny maro ao ny olona izay manana ny toe-tsaina fa ny finoana matanjaka sy ny zavatra mitsingevana tsy miraharaha. Fa izany tsy ny rehetra. Ho hitantsika ao amin'ny Soratra Masina mampiseho fa ny finoana dia ny zavatra. Mamaky isika ao amin'ny ny KJV, Hebrews. 11: 1:
"Fa ny finoana dia fanehoana ny zavatra antenaina, fanehoana ny porofo ny zavatra tsy hita."
Ny finoana dia tsy eritreretina, na mihevitra ho manana ny fiheverana fa tsy misy tena azo antoka. Ny finoana dia tsy misy ifandraisany amin'ny ara-batana saina, ahoana no hahita ny zavatra amin'ny saintsika.
Matetika isika hoe: "Mino aho fa izany no izy ka noho izany, nefa tsy azoko antoka." Indro, tamy ilay kevitra, angamba ny ampianarin'ny na ny tombantombana. Ny finoana dia zavatra hafa tanteraka, zavatra mafy orina, tena azo antoka. Ny finoana dia matoky ny fampanantenan'Andriamanitra sy ny faharesen-dahatra ny marina ny zavatra tsy hita maso dia. Eo amin'ny andininy faha-3 manao hoe:
"Finoana no hahatakatra fa noforonina izao rehetra izao noho ny teny, ka ny sary dia tsy mbola avy amin'ny zavatra hitantsika."
Finoana no mahazo lalin-tsaina sy manan-tsaina. Ny iray mahafantatra amin'ny finoana. Ny finoana mihoatra izao tontolo izao izay hita maso ny maso, ary tonga tao an-zava-misy marina ao ambadiky ny hita maso. Hoy ny Baiboly: "Finoana takatsika." Izany ny fahamarinana. Fa ny tsy mibebaka ny olona mitodika any izany rehetra izany, ary niteny hoe: "Amin'ny alalan'ny saina, mino isika." Izany dia vokatry ny saina sy ny ara-batana tsotra "fahaiza-misaina".
Ahoana no ahafahantsika mandray anjara amin'ny finoana bebe kokoa, lehibe sy matanjaka kokoa ny finoana? Hoy ny Baiboly:
"Ny finoana dia avy amin'ny tori araka ny tenin 'Andriamanitra."
Ny finoana dia tonga rehefa mihaino ny fampianaran'ny Baiboly izany rehefa anaovan'ny mpitory izay manana fahalalana lalina ny Tenin'Andriamanitra. Ny finoana ihany koa dia azo avy amin'ny namaky tsy tapaka ny Baiboly, ao amin'ny Fanahy Masina ny tari-dalana. Ny Fanahy Masina no fanosorana aloha hatreto no tsara indrindra mpampianatra Baiboly. Tamin'ny famakiana ny Teny, dia zava-dehibe ny mifantoka indrindra amin'ny teny fikasana, fa Andriamanitra efa nanao hoe: izy ireo izy, ary nampanantena izy no mihazona. Tsy maintsy tena mifikitra amin'ny teny fikasana ao amin'ny Baiboly, fa mitondra antsika.
Abrahama dia lehilahy iray izay nanana finoana matanjaka. Nomen'Andriamanitra azy ny teny fikasana ny zazalahy, izay ho tanteraka biolojika. Fa afaka mahita ny azo atao sy mbola mino tanteraka fa azo atao. Hoy ny Baiboly Verbatim avy nuBibeln, Roma. 4: 18-22:
18 "Na dia tsy nisy fanantenana, nanantena ihany i Abrahama sy ny heviny, ary noho izany dia niteraka izy no rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe: 'Noho izany dia maro ny taranakao ho.'
19 Ary noho izany i Abrahama tsy niahanahana ny amin'ny finoana, na dia efa tokony ho zato taona izy, ary nihevitra fa ny tenany tsy manan-kery, ary na ny vadiny Saraha mbola tsy afaka ny hanan-janaka, ary ankehitriny dia vao antitra loatra.
20 Ary tsy nisalasala mihitsy ao amin'ny tsy finoana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra 'Andriamanitra, noho ny finoany dia nanome azy hery, ka dia nanome voninahitra an'Andriamanitra.
21 Resy lahatra tanteraka izy fa Andriamanitra dia afaka manao na inona na inona izay nolazainy,
22 Ary dia notanana ho fahamarinany izany. "
Raha mandray an'i Abrahama ho ohatra, isika dia mahita ny fitahiana fahafahana mitombo ny finoana. Tamin'ny 1917 fandikan-teny mivaky hoe:
"... izy fa ny matanjaka ao ny finoany; manome voninahitra an'Andriamanitra ... "
Hanome voninahitra an'Andriamanitra no fomba hahazoana finoana matanjaka kokoa. Fa avy eo ny voninahitry ny Tompo eo amin'ny lalana marina. Tsy afaka manao araka ny voasoratra eo Isaia. 29:13 (nuBibeln):
"Ity firenena ity manatona Ahy amin'ny ny teniny sy mankalaza Ahy amin'ny vavany izy, fa ny fony kosa lavitra Ahy, ary ny fahatahorana an'Andriamanitra no nianatra ihany ny olona."
Mahakasika ny ny fo no tafiditra hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fiainany, tamin'ny eritreritra, teny sy ny atao. Izany no Abrahama.
Indray mandeha ny mpianany nanontany an'i Jesosy mba hampielezana ny finoany. "Ampitomboy ny finoanay", hoy izy ireo. Jesosy namaly azy hoe: Mat. 17:20:
"... Lazaiko marina aminareo: Raha manana finoana hoatra ny voan-tsinapy, dia afaka hiteny amin'io tendrombohitra io, Mifindrà erỳ, dia hifindra dia, ka tsy hisy tsy ho hainareo hatao."
Tsy misy zavatra izay nampanantenaina ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, na ho tombontsoan'ny zanak'Andriamanitra dia azo atao ho an 'ireo izay manana finoana hoatra ny voan-tsinapy. Ny tena finoana iray manontolo mametraka ny fitokiany ao amin'ny teny nambara sy ny sitrapony.
I Jesosy dia nanome fampanantenana tena tsara ao amin'ny Jaona. 14:12
"Marina tokoa, marina tokoa, Izaho milaza aminareo hoe: Izay mino Ahy koa hanao ny asa ataoko, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria mankany amin'ny Ray Aho."
Midika izany fa izy ireo dia azo atao ho an'izay rehetra manana ny tena finoana an'i Jesosy mba hanao ny asa izy, ary na dia lehibe kokoa. Moa ny Utopia, zavatra tsy miraharaha? Tsy izany mihitsy! Amin'ny alalan'ny fihainoana ny Fanahy-mpitory feno nampianatra sy mazoto mamaky sy mianatra ny Tenin'Andriamanitra dia afaka mandray soa avy amin'ny finoana toy izany.